Thai Chitima Mota dze COVID-19 Varwere vasina AC kana Zvimbuzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Thai Chitima Mota dze COVID-19 Varwere vasina AC kana Zvimbuzi
Health News • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
Thai Chitima Mota dzeCOVID-19 Varwere
Hapana mhepo inodzora uye hapana zvimbuzi… izvozvi. Ndozvinotarisana nevarwere veCOVID-19 vasina chiratidzo.
Thailand COVID-19 varwere muBangkok avo vakamirira kuendeswa kunzvimbo yekurapa vanozosarudzwa mumotokari dzechitima dzakashandurwa.
Iyi yekuzviparadzanisa nzvimbo iri kumisikidzwa kuBang Sue Grand Station's magetsi chitima depo.
Basa riri kuenderera mberi nekuisa mambure ehutu uye zvimbuzi zvekunze pamwe nekubatanidza ngoro kumagetsi nemvura.
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) uye State Railway yeThailand (SRT) vava kushanda kuvhura nzvimbo yekuzvimiririra yevarwere veCOVID-19 paBang Sue Grand Station chiteshi chechitima chemagetsi.
Thailand Gavhuna Pol. General Aswin Kwanmuang akati nzvimbo iyi ichashanda senzvimbo yekumbomira kupindwa murwere yevarwere veCOVID-19 muBangkok vakamirira kuendeswa kunzvimbo yekurapwa.
Kune gumi nemashanu asiri emhepo-ane mhepo yekurara makaradhi izvozvi ave kushandurwa kuita kusarudzika mawadhi. Ngoro imwe neimwe inokwanisa kugara kusvika kuvarwere gumi nevatanhatu, iine chete bhandi repasi riri kushandiswa. Mabasa ari kuitwa kumisikidza mosquito screens pamahwindo, kubatanidza ngoro kune grid remagetsi uye system yemvura, pamwe nekuisa zvimbuzi zvekunze.
Vakati chirongwa ichi chakatangwa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Saksayam Chidchob, uyo akatungamira State Railway yeThailand neBangkok Metropolitan Administration kuti vagadzire nzvimbo itsva yekuzviparadzanisa nevarwere pamwechete.